हावाहुरी र पानी पर्दा जान्छ विजुली, विद्युतको सास्ती कहिलेसम्म ? - Dhangadhi Khabar
हावाहुरी र पानी पर्दा जान्छ विजुली, विद्युतको सास्ती कहिलेसम्म ?
दार्चुलामा विद्युत र संचार अवरुद्ध
दार्चुला । पानी पर्यो कि बिजुुली गयो, हावा चल्यो कि बिजुली गयो, बेला बेलामा पोल ढल्यो रे, तार चुडियो रे, लाइन फल्ट भयो रे, हप्ता दिनमा लाइन अवरुद्ध, कहिले आउछ थाहा छैन् । बुझ्नुपर्छ तीन चार दिन लाग्छ । यी वाहनाले दार्चुलाका उपभोक्ता हैरान छन् । कहिलेकाँही प्राविधिक कारणले प्रसारण लाइनमा समस्या आउँछ जो स्वाभाविक हो । किनकी इलेक्ट्रिकल वस्तुहरु कहाँ कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिदैन । तर यहाँको लाईन हावाहुरी र पानी पर्दा जान्छ ।
हावाहुरी चल्ने समय चैत बैशाखदेखि लिएर असोज महिनासम्म दार्चुलाको लाइन बेला बेला अवरुद्ध हुन्छ । हप्ता दिनसम्म पनि उपभोक्तालाई सास्ती दिने विद्युत प्राधिकरण यसको उपाय खोज्दैन् । प्राधिकरणको ढिलासुस्ती र लापरवाही, प्रतिकुल मौसम र सीमित स्रोत, साधन तथा जनशक्ति अभावका कारण दार्चुलामा बेलाबेलामा विद्युत सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ ।
सवस्टेशन थालीगाडदेखि गोकुलेश्वरसम्मको लाइनमा सबैभन्दा बढि विग्रने गरेको छ । विद्युत कर्मचारीहरुका अनुसार त्यो लाईनमा वन क्षेत्र पर्ने हुदा हावाहुरी चल्ने वित्तिकै लाईन जाने गर्दछ । कहिले कहिले त यस्तो समस्या आउँछ कि लाइन के भएको हो ? दार्चुला वितरण केन्द्रलाई नै थाहा हुदैन् । फल्ट खोज्न दुई तीन दिन लाग्छ । जवाफ आउछ– फल्टको समस्या देखिएको छ, कुन ठाउँमा फल्ट छ भन्ने खोजिरहेका छौ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण पश्चात सुदूरपश्चिममा लोडसेडिङ अन्त्य हुने विश्वास लिइएको थियो । त्यसलाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जाडेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ तर जिल्लामा भने नियमित विद्युत अवरुद्ध हुन्छ । लोडसेडिङको जस्तै मार यहाँका उपभोक्ताहरुले खेपिरहेका छन् ।
विद्युत गए सामाजिक संजाल तात्छ
विद्युत उपभोक्ताहरुले अहिले विद्युतबाट सास्ती पाइरहेका छन् । लाइन गए फेसबुकमा स्टाटस लेख्नेहरुको घुइँचो हुन्छ । नानाथरी स्टाटस, विचार, सुझाव आलोचना, गाली सबै देख्न पाइन्छ । जत्ति गरे नि प्राधिकरण सुन्दैन्, देख्दैन् । यति हुदासम्म पनि केही सीप नचलेपछि अहिले सबैले कुलमान सम्झन्छन् । कुलमान दाई सुत्नु भयो कि क्या हो भनेर लेख्छन् । कसैले त कुलमान कहाँ छन् भनेर लेख्छन् । लाइन गयो कि कार्यालयमा उपभोक्ताको फोन आउन सुरु गर्छ । लाइन नआउँदासम्म टेलिफोनको घण्टी बज्न छोड्दैन । नेपाल विद्यूत प्राधिकरण, वितरण केन्द्र दार्चुला नामक कुनै सामाजिक सन्जाल साइट छैन् । उ सँग हरेक व्यक्तिसँग पहूँच भएको सामाजिक सन्जालको कुनै लिंक छैन् । विद्युत के भयो ? कहिले आउँछ ? कहाँ समस्या छ भनेर सूचना दिन फोन बाहेक अरु कुनै उपाय अवलम्बन गरेको छैन् ।
सरोकारवाला निकायको ताकेता पुगेन कि ?
जिल्लाको मूख्य समस्या भनेकै विद्युत र संचार हुन् । यी बेला बेला अवरुद्ध हुदै आएका छन् । यस विषयमा सरोकारवालाहरुले चासो नदिएको नागरिकको गुनासो छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले आफूले समय समयमा विद्युत कार्यालयका प्रमुखलाई आफ्नो कार्यकक्षमै बोलाएर समस्या के हो ? कसरी विद्युत अवरुद्ध हुन्छ ? यत्तिका समय किन बिजुली आएन भनेर बुझ्ने गरेको तथा सेवा नियमित गराउन निर्देशन दिने गरेको बताए । आफूले विद्युतीकरणको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुसँग समेत गुणस्तरीय र काम छिटो गर्न भन्ने गरेको सुनाए । जिल्ला प्रहरी प्रमुख मनोहर प्रसाद भट्टले विद्युत कार्यालयलाई समस्या समाधान छिटो गर्न भन्ने गरेको बताए । उनले भने– ‘हामीलाई सन्चार नभइ हुदैन् विद्युत छैन भने संचार पनि बन्द हुन्छ त्यसैले यसप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गरिरहेको हुन्छु ।’
वैकल्पिक विजुली पनि छैन
यदि बत्ति गयो भने पनि विकल्पको रुपमा उपयोग गर्न अन्य कुनै विजुली छैन् । गत वर्ष लास्कु खोलामा आएको बाढीले जिल्ला सदरमुकाममा नियमित पहूँच पुगेको डुङ्गरी लघुजलविद्युतमा क्षति गर्यो । विद्युत गृहका सामानमा क्षति हुदा संचालनमा आउन सकेको छैन् । यस्तै गत भदौ १३ गते आएको बाढि पहिरोले दुहुँ गाउँपालिकामा रहेका आधा दर्जन लघुजलविद्युत सबै बगायो । जसले गर्दा अहिले पनि दुहुँवासी टुकीकै उज्यालोमा छन् । अहिले राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको बत्ति गए विकल्पमा उपयोग गर्न अन्य विद्युत नहुदा उपभोक्तालाई टुकि र सौर्य उर्जाको प्रयोगको विल्पक छैन् । त्यसैले विग्रेका, भत्केका संरचना निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायले चासो दिनु अतिआवश्यक छ ।
मावन जीवनको एउटा महत्वपूर्ण अंगजस्तै बनेको छ विद्युत । हप्तादिन सम्म पनि विद्युत नपाउदा उपभोक्ताको कार्यशैलीमा समेत असर परिरहेको छ । बर्खामा पानी पर्दा होस हिउँदमा हुरी चल्दा नै किन नहोस विद्युत अवरुद्ध हुने समस्याले उपभोक्ता आजित भैसकेका छन् । यसको विकल्प र समाधान खोज्नतर्फ भने सरोकारवाला निकायले चासो देखाएका छैनन् । त्यसो त, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ख्याति कमाएका व्यक्ति हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा उनले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त बनाएका थिए । केही महिना अघि उनी पुनः नियुक्त भएका छन् । तर दार्चुलावासीले विद्युत सेवा नियमितका हिसाबले कुलमानको पुनरागमन भएको अनुभूति अझै गर्न सकेका छैनन् । दार्चुलाका ५० प्रतिशत बढि घरधुरी अझै विद्युतको पहूँचमा छैनन् । चालु आर्थिक वर्षभित्र जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण गर्ने भनिएपनि त्यो पूरा हुने छाट देखिएको छैन् । अब विद्युत प्राधिकरण यसमा जिम्मेवार भएर नियमित रूपमा विद्युत दिनुपर्छ । आम उपभोक्ताले पाएको सास्तीलाई हटाउन प्रयास गर्नुपर्छ । आफ्नो कार्यमा गैरजिम्मेवार हैन जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सास्तीलाई हटाउने उपाय र विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ र पहल गर्नुपर्छ ।
दार्चुलामा शुक्रवार देखि विद्युत अवरुद्ध भएको छ । शुक्रवार अवरुद्ध भएको विद्युत आइतवार केही घण्टा संचालनमा आएपनि पुनः सोमवारदेखि अवरुद्ध छ । यस्तै सोमवार रातीदेखि फोन तथा इन्टरनेट सेवा समेत अवरुद्ध भएको छ । फोन तथा इन्टरनेट नहुदा बैंक तथा बीत्तिय संस्थाका साथै एफएम रेडियो प्रभावित बनेका छन् ।
मङ्गलबार ०२, कार्तिक २०७८ ०१:३१ मा प्रकाशित
#दार्चुला #विद्युत #संचार #अवरुद्ध